Kutamba - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Nekuwedzera kwekurumbira uye kushandiswa kwema Smartphones, zviri pachena kuti nharembozha iri kuve inozivikanwa zuva nezuva. Mitambo kuve anoyemurwa uye anoshandiswa zvakanyanya zvikamu zveapp ane mukana wekusvitsa inoshamisa nhamba yevashandisi Uku kusangana kunosiyana kubva pakupfuura maminetsi mashoma neyakajairika pikicha kusvika pakunyura mune yekudyidzana nyaya yemaawa; vanoshandisa nhare mbozha vanongoda mitambo. Izvi ndizvo zvinoita nharembozha yemitambo maapps app anodikanwa kwazvo nhasi.
NewGenApps mugadziri ari kukura wemitambo mbozhanhare pasirese. Isu tinopa hunyanzvi mune ese ari maviri desktop pamwe nemaprojekiti epamba eGaming. Mainjiniya edu uye maartist anoshandisa yazvino matekinoroji uye maturusi ekugadzira iyo inotonhorera mutambo wemitambo.
Mukati menguva pfupi yenguva takagadzira mapurojekiti mazhinji emitambo se "Anatex", "Kubhururuka Avatar", Uye"Verbal Volley”Ne100% kugutsikana kwevatengi. Isu takawana rutsigiro rwakakura rwevatengi kubvira pakatanga nekuvapa iwo akanakisa eakagadziriswa mhinduro mutambo wekuvandudza.
Pane nzira dzinoverengeka dzekuita mari kuburikidza neMitambo. Chakareruka ndeyeyeyekubhadhara-kurodha modhi, umo mushandisi anobhadhara imwe mwero kurodha pasi mutambo pakutanga. Iyo yakajairika ikozvino-a-mazuva ndeye-ye-mukati yekutenga modhi; mune iyi modhi, mutambo pachawo wakasununguka, asi zvinhu zvakaita semasimba akasarudzika, zviwanikwa zvekuyambuka nhanho, uye zvimwe zvekuwedzera zvinogona kutengwa mukati memutambo. Zvakare, mutambo wemahara unogona kutsigirwa nekushambadzira.
Isu hunyanzvi muminda inotevera yeDevelopment Game
1. Runhare / iOS Game Kubudirira
2. Android nhare Yemitambo Kubudirira
3. iPad Game Kubudirira
4. Facebook Game Kubudirira
5. HTML5 nhare Yemitambo Kubudirira
6. 2D uye 3D Mitambo